Ragga galmada jecel oo markey halmar biya baxaan - iftineducation.com
Ragga galmada jecel oo markey halmar biya baxaan
iftineducation.com – Ragga qaar ayaa waxa ay ka cawdaan in ay dareemayaan wal wal xagga falgalka ah waayo mar wayaliba waxa ay isweydiinayaan hadii qalab saan oo kale ah aad kula falgashid xaaskaada armey ceeb iyo balaayo kaa soo raacdaa.
Miskiin ka walwasan cabirka baharlkiisa
Nimanka ka cowda yaraanta bahalkooda ayaa mar waliba wax ay ku dadaalaan mar un sidii ay wax un ugu badali lahaayeen cabir xumada haysata bahalkooda.
Arrinkaan ayaa mararka qaar waxa uu sabsaba cudurada maskaxda ah waayo qofka mar hadduu uu qanaacada ka tago waxa imaanaysa in uu isku buuqa kadibna isbitaal sidaas uu ku galo.
Ku qanac qadarta aad heshay mana ah in ay ragga qaar ee kaa cabir weyn in ay ku dheeryiin raaxo waxaaba laga yaabaa in ay iyagana ay ka sheeganayaan balaaoyo kale iyo raaxo dara sababtay cabirkiisa oo weyn.
Xiliga Dagaalka Qaboow Uu Ka Qarxo Sariirta Haweenka Maxay U Dhibsadaan Malabyarowga ? Sababta Oo Laguu Hayo
Ninyahow ha isticmalin qaabkaan galmada loogama dhargo biyahaa kaa